WPS Xafiiska alfa 18 64-bit naqshadaha | Laga soo bilaabo Linux
Sida cinwaanka boostada uu tilmaamayo, waxaan horeyba u tijaabin karnaa WPS Office kombiyuutarrada leh processor-yada 64-bit.
Quick Access Mini Toolbar si aad u qaabeyso qoraalka la xushay.
barasantigareeyaan la jaan qaadaya xisaabinta hakad.
Tarjumaad cusub oo ka timid luuqada Polishka, waad ku mahadsantahay Andrzej Kamiński.
Hadda waan beddeli karnaa oo dooran karnaa wadahadal luqadeed.
WPS Office alpha 18 Linux hadda waxaa loo heli karaa 64-bit iyo 32-bit naqshadaha.
Bulshooyinka Xafiiska WPS way korayaan oo waxay ka caawinayaan tarjumaadda. Bulshada Polishka WPS Office waxay u turjumeen dhamaan faylasha luqadaha UI-luuqada Ingriiska iyo Boolishka Polish. Luuqadda Ruushka oo ay weheliyaan luqadaha leh tarjumaadda UI ee ugu fiican. Intaa waxaa dheer, bulshooyinka Romania, Slovenia iyo South Korea ayaa ku soo biiray.
Tijaabinta WPS Office alpha 18 ee Linux Waxaan xaqiijiyey in tarjumaada Isbaanishka ee WPS Office alpha 18 UI uusan si sax ah u shaqeynaynin. Dhibaatadaas ayaan kala kulmay Qoraaga Xafiiska WPS.
U soo dejiso WPS Office alpha 18 ee Linux:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » WPS Xafiiska alfa 18 64-bit naqshadaha
Waad ku mahadsantahay macluumaadka, sidoo kale waxaan haystaa dhibaatada tarjumaadda qoraha alpha 16 ee aan ku rakibey kumbuyuutarka laakiin, in kasta oo ay isku mid yihiin qolkan MSO, wali ma qancin karo naftayda taas waa sababta aan ugu dhejiyay LO 4.4 oo aan inta badan isticmaalo.
Ku jawaab Bperez
Xaaladdayda, inbadan ayaan u adeegsadaa Qoraa LO si aan u qabsado shaqadayda.
Waad ku mahadsantahay ka tagida faallooyinkaaga iyo khibradaada.
Ma software bilaash ah?
Waa software lahaansho, laakiin isku xirka ugu saxsan ee MS Office ilaa maanta. Waxay u shaqeysaa si weyn, laakiin waxay leedahay cillado yar, oo aan ahayn il furan - kuwa aan ka reeban fikradaheeda.
Wuxuu kaloo raaciyaa inaan si buuxda loogu turjumin Isbaanish.
Hal su'aal, "heer sare" ee WSP Office ma sameyn kartaa muuqaallo muuqaal ah? nooca aan haysto ayaa ikhtiyaarkaas la xanibay.
Ku jawaab Rorro
Ogeysiis: "Hooyo" Fedora waxay dhashay gabadheeda yar 22.
Fedora miyaa horey ugu darsatay UselessD meelaheeda keydka?
Waxaan ka shakisanahay in waxaas oo kale weligood dhici doonaan.
Waxaan isku dayaa inaan arko haddii aad ku rakibi karto qashinka aad isticmaaleyso… .hahahaha
Xiiso leh, maxaa yeelay waan ka dheregsanaa iyada oo aan cunaayo ku tiirsanaanta multiarch.
Waxaan la yaabanahay haddii ay leedahay basaasnimo ?????
WPS waa barnaamij gebi ahaanba xasilloon oo halyeeyga ah inuu si fiican ula jaan qaadayo faylasha LO / OO waa intaas, halyeey xaqiiqda ka fog.
Sidoo kale, ma taageerto opendocument-ka oo dowladda Shiinaha ayaa ka dambeysa softiweerkan lahaanshaha leh, kuma kalsooni timo.
Gacaliye haddii hubaha higaaddu shaqeeyo, waxaan u isticmaalaa si is barbar dhig ah LO maxaa yeelay barnaamijkani aad buu ula jaanqaadi karaa MS Office, waa beddel dhab ah! Waxaan haystaa tallaal laakiin tifaftirahaani ma oggola inuu soo dhigo sawirro.
Ku jawaab daveman76
Hadday rabaan inay hubiyaan higaada http://wps-community.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=6163
Aad baan u Caawiyay
Ku jawaab والپیپر HD